သင့်မျက်နှာကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ရေနွေးငွေ့ခံတဲ့အခါ ရရှိလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) - Lifestyle Myanmar
သင့်မျက်နှာကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ရေနွေးငွေ့ခံတဲ့အခါ ရရှိလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅)
ကန်ရာသီဖွားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ
“တာ့တာ” ပြသွားတဲ့လက်အကြောင်း မကောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ဒီနေ့ သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် စတင်ပြီး ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အရာ (၈) ချက်
မိန်းကလေးတွေအတွက် လုံးဝမစဥ်းစားသင့်တဲ့ ယောက်ျားအမျိုးအစား (၅) မျိုး
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ(True Love)အကြောင်း သင်သိထားသင့်သော အရာ (၄) ချက်
ပိန္နဲသီးကို စားသုံးပါက ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်သလဲ?
အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် စွန့်လွှတ်လိုက်သင့်သော အရာ (၁၀) ချက်
ကုထုံးပညာရှင်တွေ ရှင်းပြထားတဲ့ ဘယ်တော့မှ လျစ်လျူမရှုရမယ့် ထပ်တလဲလဲအိပ်မက်များ
Lemon Water သောက်သုံးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သင့်ကို မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ရဲရင့်သူတစ်ဦးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ချက်
ကျွန်မတို့နေ့စဉ်လိမ်းနေတဲ့ မိတ်ကပ်အလှကုန်တွေ၊ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖုန်မှုန့်နှင့် မီးခိုးငွေ့တွေက ကျွန်မတို့မျက်နှာကို ချွေးပေါက်ပိတ်စေပြီး ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတာ၊ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတာ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပုံမှန်ပေါင်းခံပေးရင် တွေ့ကြုံခံစားရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေလိုပါတယ်။
၁။ သင့်ချွေးပေါက်ထဲမှ စုပုံနေတဲ့ အလှကုန်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်
မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့ ခံပေးတဲ့အခါ ရေငွေ့ရဲ့နွေးထွေးမှုက ချွေးပေါက်တွေကို relax ဖြစ်စေပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်စေပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေပွင့်သွားတာနဲ့ အတွင်းမှာ စုပြုံနေတဲ့ ဖုန်အညစ်အကြေးတွေ၊ မိတ်ကပ်တွေကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
၂။ ဝက်ခြံကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်
သင့်အသားအရေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အများစုလိုပဲ မျက်နှာပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယား အသေကောင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ ထိုဘက်တီးရီးယားတွေက နေရာယူနေပြီး သင့်အသားအရေကို အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ သင့်မျက်နှာကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းခံတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားအသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
၃။ မျက်နှာကို အောက်ဆီဂျင် ပိုရစေပါလိမ့်မယ်
အချို့လူတွေက rosacea ကဲ့သို့သော ဓါတ်မတည့်မှုခံစားရတဲ့အခါ ရေနွေးငွေ့ကို ရှောင်ရှားလိုကြပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံခြင်းရဲ့ ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုက သင့်မျက်နှာကို အောက်ဆီဂျင်သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကြောင့် သွေးကြောတွေ ကျယ်လာခြင်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မျက်နှာနီမြန်းလာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ အောက်ဆီဂျင်အချို့ လည်ပတ်နေပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
၄။ အရေးအကြောင်းပေါ်လာတာကို နှောင့်နှေးစေပါလိမ့်မယ်
အရေးအကြောင်းတွေဟာ သန်းနဲ့ချီသော အမျိုးသမီးတွေ နှောင့်နှေးစေချင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ကော်လာဂျင်မှီဝဲတာတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကော်လာဂျင်ကို စားသုံးမှာ မဟုတ်ရင် ရေနွေးငွေ့က အခြားရွေးချယ်စရာ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းခံပေးခြင်းက သငသွေးလည်ပတ်မှုကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ကော်လာဂျင်နှင့် elastin ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်တာကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
၅။ ရေဓါတ်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြည့်တင်းပေးပါလိမ့်မယ်
ဆီဘမ်းနှင့် အဆီကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရေဓါတ်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်ကို တိုးစေပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေတဲ့ သဘာဝအဆီ ထုတ်လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေနွေးငွေ့က အသားအရေကို စိုစွတ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆။ skincare အလှကုန်တွေကို ကောင်းကောင်းစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်
သင့်အသားအရေကို ရေနွေးငွေ့ပေါင်းခံပေးခြင်းက အပြည့်အဝ ကုသမှုမဟုတ်ပေမယ့် ၎င်းကို အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုစနစ်ရဲ့ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှု့မြင်သင့်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အရာက သင့်မျက်နှာမှာ မကြာခဏ အသုံးပြုတဲ့ ခရမ်၊ လိုးရှင်းတွေနဲ့ cleanser တွေရဲ့ အာနိသင်ကို ပိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအားသာချက်က သင့်အရေပြားကို အောက်ဆီဂျင်နှင့် သွေးလည်ပတ်မှု တိုးမြှင့်ပေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေ လွတ်လပ်သွားတာကြောင့် skincareတွေကို ပိုပြီးစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်အသားအရေကို စိုစွတ်စေတာကြောင့် ဆီရမ်လိမ်းတဲ့အခါ ပိုသိသာတဲ့ သက်ရောက်မှု ရရှိပါလိမ့်မယ်။
သံပုရာရေသည် လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့ ဖျော်ရည်တမျိုးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တာကို လူတော်တော်များများသိကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သံပုရာရည်သောက်သုံးပါက ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးစဉ်မှာ သံပုရာရည်သောက်သုံးတာ လုံခြုံမှုရှိသလား? များသောအားဖြင့်တော့ သံပုရာရည်သောက်သုံးတာဟာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။...
သင့်ဆံပင်အရောင်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သောအရာ (၅)ခုနှင့် ထိန်းသိမ်းဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေမှာ သင်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကောင်း ရရှိဖို့ ဓါတုပစ္စည်းပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်ပါဝင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ကို မဆိုးခင်၊ ဆိုးနေစဉ်နှင့် ဆိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ငွေရောင် (သို့) မဟော်ဂနီရောင်တွေက သင့်နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေပေမယ့် အရောင်ကြာရှည်ခံပြီး ဆံပင်ကျန်းမာနေစေဖို့...
လေဖြတ်ခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်ရွက်ချက် (၇)ခု
ဦးနှောက်ရဲ့ ဧရိယာသို့ သွေးပံ့ပိုးမှုက လိုတာထက် လျော့နည်းသွားတဲ့အခါ(သို့) ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အာရုံခံဆဲလ်တွေ ပျက်စီးသွားနိုင် (သို့) သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာကို ရှောင်ရှားဖို့ လေဖြတ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Neurology ဂျာနယ်မှ...
စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသောလေ့ကျင့်ခန်း ၄ မျိုး
လူတွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားတာက စိတ်ဖိစီးမှုပါဘဲ။ ဒါကိုလုပ်မှလုပ်နိုင်ပါ့မလား၊ ဒီတခုကို မှားယွင်းသွားခဲ့ရင် အစရှိတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အစပြုခဲ့တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း၊ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည် အစရှိတာတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးသလိုဖြစ်စေပြီး လုံလောက်တဲ့အားအင်တွေ၊ ရရှိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကနေ သွေဖယ်သွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို...